Barlamaanka Puntland oo dood ka dib wax ka badal ku sameyey xeerka DoorashoyinkaGolayasha Degaanka. | Sahan radio
Barlamaanka Puntland oo dood ka dib wax ka badal ku sameyey xeerka DoorashoyinkaGolayasha Degaanka.
Garoowe (SR): Golaha wakiiladda Puntland oo mudadaan ku guda jiray fadhi aan caadi ahaynoo uu isugu yeeray Madaxweynaha Puntaland C/raxmaan Maxamed Faroole ayaa gudiu saaray Xeerkan.
Gudigaas oo ka kooban 5 xubnood ayaa waxay barlamaanka u qaabilsanyihiin Arrimaha Gudaha & D/hose waxaana ay falanqayn ka dib golaha soo hordhigeen Xeerka iyo waxyaalaha ay wax kabadalka ku sameyeen,iyadoo labada qodob ee laga doodayey ay ahayeen Tirakoobka Bulshada Puntland inta aan doorasho la gelin iyo In shuruudaha laga rabo codbixiyaha oo ay ugu horeyso helitaanka Kaarka aqoonsiga Muwadinimada.
Qodobka 3aad ee Xeerka oo ahaa Shurudaha laga rabo codbixiyaha
3.1 ayaa gudigu kusoo kobeen Waa inuu yahay Muwaadin Puntland ah.
Gudoomiyaha Golaha wakiiladda C/rashiid Maxamed Xirsi ayaa dooda u qaybiyey xubnaha wakiiladda waxaana si weyn loogu kara aragti duwanaday xeerka iyo sida ay wax uga soo badaleen gudiga loo igmaday iyadoo ay jireen qodobo sidoodii gudigu usoo celiyey.
Mudanayaasha ayaa waxaa soo xaadiray 40 xildhibaan waxaana Markii danbe uu gudoonku ku dhawaaqay in cod la geliyo xeerkan waxaana wax ka badalka ogolaaday 35 xildhibaan,waxaa diiday 4 mudane halka ay ka aamustay 1 xildhibaan.
Dooda mudanayaasha ayaa ahayd mid xasaasi ah waxaana loo gudbidonaa sidii loo habayn lahaa arrimaha yaryar ee farsamo ee uu u bahanyahay Xeerkani sida uu sheegay gudoomiyaha Goluhu.
Xeerka oo ay soo gudbisay xukuumadu ayaa waxaa si adag uga soo horjeensaday wax ka badalkiisa qaar ka mid ah ururada siyaasadeed ,kuwaasi oo sheegay hadiiba wax laga badalo in aanay galidoonin doorashada golayaasha deegaanka ee lagu wado in la qabto bisha May ee Sanadkan.